‘ग्राहकको सन्तृष्टि नै नबिलको उत्कृष्ट बैंक बन्ने आधार हो’:- बैंकर कृष्ण सुवेदी - नेपालबहस
‘ग्राहकको सन्तृष्टि नै नबिलको उत्कृष्ट बैंक बन्ने आधार हो’:- बैंकर कृष्ण सुवेदी
| १३:१०:३९ मा प्रकाशित
कोरोना कहरका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता बढेर गएको छ । कुनै समय तरलता अभावको चर्को समस्या झेलेका बैंकहरू संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेप तान्न तछाडमछाड गर्थे । अहिले अवस्था फरक छ । कोरोना महामारीका कारण नयाँ लगानी गर्ने ठाउँ छैन् । त्यसो हुँदा बैंकमा निक्षेप बढेको बढ्यै छ ।
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको छ । कुनै समय १५/१६ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा झरेको छ । बैंकहरूको सीसीडी रेसियो (कर्जा र निक्षेप अनुपात) सहज अवस्थामा छ । अझ सकारात्मक पक्ष, कर्जा भन्दा निक्षेपको ब्याज महँगो देखिएको छ । नयाँ लगानीको ठाउँ नपाएर तरलता थुप्रिएको बेला बैंकहरू किन महँगो निक्षेप योजनाहरू पस्किरहेका छन् त ? यो विषय निकै पेचिलो देखिएको छ ।
बैंकर कृष्ण सुवेदीसँग यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपालबहस डटकमले संवाद गरेको छ । संस्थागत बैंकिङ र बाह्य मामिलामा जानकार उनी अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तर बैंकिङ व्यवस्थापन र प्रणाली सुधारमा पनि उतिकै दख्खल राख्छन् । सुवेदी हाल नबिलको प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन तथा सञ्चार विभाग प्रमुख छन् । बैंकिङ क्षेत्रको तरलता, निक्षेपको महँगो ब्याज तथा लगानी व्यवस्थापन लगायत विषयमा सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी :-
कोभिड–१९ महामारीकै बीच बैंकहरूमा तरलता बढेको, ऋण लगानी नभएकोले नबिलले कर्जामा भन्दा निक्षेपमा राम्रा योजना ल्याइरहेको छ, किन यसो गरियो ?
हाम्रो बैंकको आन्तरिक निक्षेपको म्याचुरिटी प्रोफाइल, कल तथा चालू खाता, मुद्दति तथा बचत निक्षेप लगायत पक्ष मिलाउनुपर्नेछ । त्यसैले हामी लचिलो भएका हौं । बैंकले सँधैभरि नाफा कमाइरहेकै हुन्छन् । ऋण लगानी गरेर नै नाफा कमाउने हो । अहिले व्यवसाय गरेर नाफा कमाउने अवस्था छैन ।
यस्तो बेलामा पैसा भएका तर रोजगारी गुमेका मानिसहरूको ढुकुटी हुन्छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर थोरै भएपनि आम्दानीको वातावरण होस् भन्ने हेतुले ‘निक्षेप योजनाहरू’ ल्याएका हौं । मानिसलाई ढुक्कसँग नबिलमा पैसा राखेर आम्दानी होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । सम्भावित क्षेत्रमा भने लगानी भइरहेकै छ ।
यो साँच्चै ग्राहकप्रतिको सदभाव हो वा कोभिडपछि तरलता अभाव बढ्छ भन्ने अनुमानले अहिले नै निक्षेप सोहोर्न थालिएको हो ?
त्यसरी विश्लेषण गर्न नमिल्ला । पहिलो, हामीले हाम्रो बैंकको आन्तरिक क्षमता अनुसार निक्षेप व्यवस्थापन गर्न यो रणनीति लिएका हौं । दोस्रो, हामीले यो काम पुस-माघपछि पनि गर्न सक्थौं । तर, अहिले बजारमा तरलता फालाफाल भएको हुँदा सुरु गरिएको हो ।
तरलता व्यवस्थापनमा एक प्रकारको अन्योलता छ । अहिले जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज सस्तो छ । जग्गाको कारोबार (बेचबिखन) छैन । मानिसहरूको रोजगारी गुमेको छ । यो अवस्थामा हामीले अरू वित्तीय संस्थाले नगरेको भूमिका निर्वाह गरेका छौं ।महामारीको समयमा पनि जिम्मेवार बैंक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो ।
समाजप्रति हामी जिम्मेवार छौं भनेर निक्षेप मागिरहेका छौं । हामीले संस्थागत निक्षेप उठाएका छैनौं, व्यक्तिगत मात्र हो । यसबाट बैंकलाई कुनैपनि बेला एकैपटक ठूलो भार पर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । महामारीको बेलामा पनि ‘नबिलले सर्वसाधारणको निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दिएको छ’ भन्ने सन्देश जावस् भन्ने हो ।
बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता कति प्रतिशत छन् ?
हामीसँग लगभग ७ लाखको हाराहारीमा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता छन् ।
निक्षेपमा कति प्रतिशत व्यक्तिगत निक्षेपको योगदान छ ?
त्यो करिब ७० प्रतिशत छ ।
शेयर कर्जा नै ७.७५ प्रतिशतमा लगानी भइरहेको छ । यसले बैंकको मुनाफा, बोनस, लाभांश जस्ता वित्तीय पक्षमा असर गर्दैन ?
बैंक सञ्चालनको पहिलो स्रोत वा कच्चापदार्थ भनेको निक्षेप हो । निक्षेपको स्रोत दुई वटा हुन्छ, पहिलो व्यक्तिगत र दोस्रो संस्थागत । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार संस्थागत निक्षेपलाई कूल निक्षेपको ५० प्रतिशतमा लगेर (क्याप) गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ‘व्यक्तिगत निक्षेप जति सक्छौ उठाउ’ भन्ने कुरा निर्दिष्ट गरेको छ ।
दीर्घकालीन निक्षेप पनि व्यक्तिगत नै हो । त्यसकारण, हाम्रो ९ प्रतिशत निक्षेपको ‘अफर’ ग्राहकमुखी बनाउने लगानीको अवसर हो । अहिलेको अवस्थामा निक्षेप संकलन मास बैंकिङमा जाने ठूलो हतियार र बजारमा बैंक चिनिने आधार पनि हो । अहिले बैंकमा ग्राहक आउने क्रम बढेको छ । हाम्रा कल सेन्टरहरू व्यस्त छन् ।
हाम्रा ब्रान्चहरू र स्टाफहरू अहिलेको समयमा पनि व्यस्त छन् । यो कुराले हामीलाई हौसला बढेको छ । ग्राहकको आगमनले हामीलाई झनै उत्साह थपेको छ । ग्राहकहरूले हाम्रो बैंकप्रति देखाउनु भएको मायाले हामीलाई काम गर्न झन जाँगर थपेको छ । यसो हुँदा प्रतिकूल समयमा पनि ‘हामीले गलत निर्णय गरेका छौं’ भन्ने लाग्दैन । हामीले बैंकमा ग्राहक बढ्ने, मिश्रित निक्षेपको अवस्था कायम गर्न सकिने र महामारीको बेला निक्षेपकर्तालाई आम्दानी पनि हुने वातावरण मिलाएका छौं ।
घर कर्जा पनि ७.४९ प्रतिशतमा दिइएको छ । यो त आधारदर भन्दा पनि सस्तो भयो । कुनै बेलाको पहिलो नम्बरको बैंकलाई पनि ऋण खोसाखोस गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
यो होइन । बजारमा माग र आपूर्तिको अभ्यास सँधै चलिरहेको हुन्छ । बैंकहरूले सीसीडी रेसियो ७९ प्रतिशत पुगेको बेला रणनीतिहरू बदले जस्तै रेसियो कम हुँदा पनि बदल्ने गर्छन् । अहिले हामीले संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाएका छौं । यसले पनि एउटा सन्तुलन मिलाएको छ ।
कुनै सानो व्यापार, समूह, घरपरिवार र व्यक्तिलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको हो, हाम्रो बैंकले । एउटा मानिसको जीवनमा परिवारको ठूलो आशा र भरोसा हुन्छ । जीवनभर कमाएको पैसाले एउटा घर बनाउन खोजेको हुन्छ । बैंकको ब्याज १२–१४ प्रतिशत पुगेको बेला व्यक्तिले कुनै पनि मनोवैज्ञानिक निर्णय गर्न सक्दैन ।
अहिले रेट घटेको वा ७ प्रतिशत हाराहारी ब्याज भएको बेला मानिसले त्यो मनोवैज्ञानिक निर्णय गर्न सक्छ । गरिब तथा मध्यमबर्गीय मानिसलाई समेत होस् भनेर बैंकले यो ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । फेरि, यो ब्याज रातारात बढेर १२ प्रतिशत पुग्ने पनि होइन । १/२ प्रतिशत तलमाथि हुने हो, त्यो पनि समग्रमा ।
यो सबै कुरा समग्रमा बुझ्ने हो भने बैंकको सहुलियत प्रयोग गरेर व्यक्तिले चाहेको बेला सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाउन, जनजीवन चलाउन सकुन् । अर्कोतर्फ, पैसा हुनेहरूले बैंकमा राखेर थोरै भए पनि ब्याजमार्फत आम्दानी गरुन् भन्ने नै हाम्रो सोच हो । यस्तै बर्गलाई हामीले उत्प्रेरित गर्न खोजेका छौं ।
संस्थागत निक्षेपको ब्याज कति दिइरहनु भएको छ ?
७ प्रतिशत हाराहारी छ ।
बिनाधितो १ लाख अनलाइन अफर नबिलको कस्तो स्किम हो ?
हामीले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको प्रोडक्ट हो । जागिरे जीवन बिताउने धेरै मानिसको जीवन तनावयुक्त हुन सक्छ ।उनीहरूले जागिर त खान्छन् तर भनेको बेलामा २०–५० हजार, १ लाखसम्मको कारण तनाव झेलेको हुन सक्छ । यति रकम साथीभाइ, आफन्त वा कोहीसँग माग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । जीवनमा आउने यस्तै समस्यासँग सामान गर्न यो स्किम ल्याइएको हो । यो सबैमा लागू हुँदैन । जसले हाम्रो बैंकमा तलबी खाता खोलेर ६ महिनासम्म कारोबार गरेका छन्, त्यस्तालाई दिइन्छ ।
स्किमअनुसार पैसा चाहिए हामीले कम्प्युटर प्रद्धतिबाट सुक्ष्म निरिक्षण गर्छौं । जसले कम खर्च गरेको छ, न्यूनतम ब्यालेन्स राखिरहेको छ ।त्यसको आधारमा कम्प्युटर सिस्टमले तत्कालै डाटा एनलाइसीस गरेर ५० हजार वा एकलाख लागि योग्य ठहर्याउँछ । त्यसलाई सिस्टमबाट एसेप्ट गर्नासाथ सम्बन्धितको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । त्यो रकम झिक्न र चलाउन सकिनेछ ।
यसो हुँदा एक लाख रुपैयाँसम्मको ऋण बिनाकागजी प्रक्रिया बैंकबाट पाइन्छ । जसका कारण उसको आवश्यकता पूरा गर्न सहज भयो । ऋण लिन झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया पनि मिलाइरहनु परेन । खास गरी जागिरे व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताका व्यवहारिक कठिनाइ कम गर्न यो स्किम ल्याइएको हो ।
यहाँ भर्खरै नबिलमा प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन तथा सञ्चार विभाग प्रमुख बनेर आउनुभएको छ । यही बीचमा कोरोना महामारी फैलियो । आफ्नो जिम्मेवारी कसरी बहन गरिरहनु भएको छ ?
हाम्रो सीईओले पनि बेला–बेला भन्ने गर्नुभएको छ, सामान्य अवस्थामा जस्तो नबिल बैंक होइन । देशका सम्पूर्ण नागरिकले महसुस गर्नसक्ने गरी हामी उनीहरूको भावनामा समेत छौं । यसो हुँदा त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ । काम गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकले तोकेका सावधानी अपनाएर व्यवसायलाई निरन्तरता दिइएको छ । हामीसँग अरू विकल्प पनि छैन ।
कठिनाइसँग जुध्दै र सामाजिक दूरी कायम राख्दै हामीले आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । ‘वर्क फर्म होम’ पनि अपनाइएको छ । यही बीचमा पनि कति वित्तीय संस्थाले व्यवसाय विस्तार गर्न सकेका छैनन् । हामीले गर्न सकिन्छ, प्रतिकूल अवस्थामा पनि अवसर छ/हुन्छ भन्ने हिम्मत गरेका छौं । प्रतिकूल अवस्थामै अनुकूलता हेरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने बैंक रणनीति हो । सबै शाखाले यसअनुरूप काम गरिरहेका छन् ।
कोरोना महामारी अन्त्य भएन र अझै बढेर गए बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहला ? नबिलले आफ्नो स्थान कसरी सन्तुलित बनाउँदै लैजान सक्ला ?
अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । म यसको जवाफ दिने आधिकारिक व्यक्ति होइन । तर, मेरो विचारमा यो बैंकिङ उद्योगभित्रकै समस्या हो ।यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका रहन्छ । राज्यले नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि कस्तो नीति लिने ? के गर्ने भन्ने कुराले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ला ।
हामीले गर्ने भनेको आन्तरिक व्यवसाय विस्तार हो ।
त्यसमा प्रणाली महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैलाई कसरी अनुशरण गर्ने ? कसरी कार्यन्वयन गर्ने ? भन्नेमा टिमलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्छ । आफू पनि आत्मविश्वासका साथ लाग्नुपर्छ । जुनरूपमा महामारीका कारण खराब अवस्था आउला भनेर सोचिएको छ त्यस्तो नहुन सक्छ । वा यो भन्दा अझ खराब अवस्था पनि आउला । यी दुवै परिस्थितिलाई मनन् गरेर पूर्वयोजनाका साथ काम गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि ठूलो असर पर्दैन ।
नबिलसँग जोडिएका र जोडिने ग्राहकलाई के भन्नुहुन्छ ?
सम्पूर्ण ग्राहकवर्गमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने– नबिल बैंकले थुप्रै किसिमका योजना, निक्षेप, कर्जा र स्किमहरू ल्याएको छ । यस्ता स्किमहरूको भरपुर फाइदा उठाउनुहोस् । नबिललाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् । हामीबाट केही त्रुटीहरू भएका छन् भने औंल्याइदिनुहोस् ।
हामीले शाखा कार्यालयहरूलाई भनेका छौं– भोलिका दिनमा हामीले आफ्नो तरिकाले होइन ग्राहकले मागे अनुसारका योजना बनाउने हो । हामी ग्राहकमैत्री योजनाहरू ल्याउने तयारीमा छौं । हामीले कलसेन्टर स्थापना गरेका छौं । कल सेन्टरमार्फत आएका कुरालाई सुन्छौं । हामी ग्राहकसँगै छौं र ग्राहकमै समर्पित हुन्छौं ।
नबिलले आफूलाई एक नम्बरमै उभ्याउन खोजिरहेको छ ?
होइन, यो नम्बर १ वा २ मा हामी लाग्दैनौं । यो बजारको कुरा हो । हामी के भन्छौं भने नम्बरभन्दा ठूलो कुरा ग्राहक हुन् । हिजो पनि ग्राहकमा नै समर्पित थियौं । आज छौं र भोलि पनि हुनेछौं । ग्राहकको सन्तृष्टिले हामीलाई नम्बर १ भन्दा माथि पुर्याउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
तस्करीको लेनदेन र दररेट नमिल्दा सीमा नाकामा गोली हानाहान १२ घण्टा पहिले
स्थानीय तह विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गर्ने तयारीमा १३ घण्टा पहिले
आज थप १३०४ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि १४ घण्टा पहिले
झापामा संक्रमित महिलाको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु १४ घण्टा पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? १२ मिनेट पहिले
धुम्बाराहीबाट तर्सिए ओली, सविचालय बैठक बालुवाटारमै बस्ने ! १९ घण्टा पहिले
मानुङकोटमा पूर्वाधार निर्माण गर्न वरिष्ठ नेता पौडेलको जोड १९ घण्टा पहिले
राप्रपालाई वैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्थापित गरिने : थापा ११ घण्टा पहिले
मैतीदेवी पेट्रोलपम्प नजिक खपटासहित दुई पक्राउ २२ घण्टा पहिले
एचआईभी संक्रमितलाई क्षयरोगको जोखिम पनि उच्च २१ घण्टा पहिले
कोरोनाले खुम्चीएको पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल ३ दिन पहिले
सरकारले अर्को हप्तादेखि भारतका लागि अन्तराष्ट्रिय उडान खोल्ने १ दिन पहिले
अब सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले ७.५ प्रतिशत प्रतिफल पाउने ५ दिन पहिले
ओलीवादको एकलौटी ध्रुविकरण प्रचण्डको साहस र हिम्मतले ध्वस्त ३ दिन पहिले
कास्कीमा दुई छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा एकको मृत्यु, तीन घाइते ११ घण्टा पहिले
अचानक सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीको काज सरुवा, अवकाश हुन लागेकालाई हेडक्वाटर तानियो (सूचीसहित) ४ दिन पहिले
देशभरिका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै ६ दिन पहिले
तिहारमा बाणिज्य बैंकका सबै शाखा बन्द हुने, ६ हजार कर्मचारी संक्रमित ३ हप्ता पहिले
बाफलमा ट्रकको ठक्करबाट दुई वर्षीया बालिकाको मृत्यु ४ हप्ता पहिले
पेन्सिल्भेनिया राज्यको मतगणना उल्ट्याउने निवेदन खारेज, ट्रम्पको अभियानमा ठूलो धक्का १ हप्ता पहिले
नेचुङमा बीओपी स्थापना भएको ६ महिनापछि भवन निर्माण शुरु ४ हप्ता पहिले
बाघ भालु भएको जंगलमा चार सय भेडाबाख्राको गोठ, भोटे कुकुर हेरालु ! २ हप्ता पहिले
बन्दाबन्दी उल्लङ्घन गर्नेबाट रु ७० हजार राजश्व ७ महिना पहिले
पाल्पामा ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो र शीतल घर ९ महिना पहिले
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० : विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन ७१ देशमा एकै पटक सन्देश १ वर्ष पहिले
प्रभु पेबाट गंगालाल अस्पतालको टिकट १० महिना पहिले